ဓါတ်ပုံသတင်း Archives - Page4of 19 - News @ M-Media
၂၀၁၆ ရမဿွာန်ဥပုတ်လ ပန်းသေးမိသားစု များ၏ ဝါထွက်ချိန် ပုံရိပ်များ (ဓါတ်ပုံ သတင်း)
ဇွန် ၁၂ ၊ ၂၀၁၆ M-Media . ဇွန် ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တို့ရဲ့ ရမဿွာန်ဥပုတ်လ (၅) ရက်မြောက်နေ့ ဥပုတ်ထွက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေကြတဲ့[Read More…]
June 12, 2016 — ဓါတ်ပုံသတင်း, မြန်မာသတင်း
မွတ်စလင်တို့ရဲ့ ရမဿွန် ဥပုတ်လ ပထမနေ့ ဝါမထွက်ခင် ရန်ကုန်မှ မြင်ကွင်းအချို့ (ဓါတ်ပုံသတင်း)
ဇွန် ၇ ၊ ၂၀၁၆ (M-Media) . ဒီကနေ့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့ရဲ့ ရမဿွာန် ဥပုတ်လ ပထမဆုံး ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ညနေ နေဝင် ဥပုတ်မထွက်ခင် အစားအသောက်များ ရောင်းချ၊ ဝယ်ယူနေကြပုံ၊ သက်ဆိုင်ရာ[Read More…]
June 7, 2016 — ဓါတ်ပုံသတင်း
မမလ ဌာနချူပ် မှ ဦးစီးပြီး အကြိမ်(၂၀) မြောက် စုပေါင်း သွေးလှူ၊ ၊ ယခုထိ (၄၃၂၉ ) ဦး သွေးလှူဒါန်းနိုင်ခဲ့
မတ် ၂၀၊ ၂၀၁၆ M-Media သတင်း/ဓာတ်ပုံ – မိုးစက် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ မြန်မာမွတ်စလင်မ် လူငယ်များ (ဘာသာရေး) အဖွဲ့မှ ဦးစီးပြီး အကြိမ် (၂၀) မြောက် စုပေါင်း သွေးလှူဒါန်းပွဲကို ယနေ့ မနက်(၈)[Read More…]
March 20, 2016 — ဓါတ်ပုံသတင်း, မြန်မာသတင်း
နိုဘယ်- မြန်မာ စာအုပ်ပွဲတော် (၂၀၁၆)
နိုဘယ်- မြန်မာ စာအုပ်ပွဲတော် (၂၀၁၆) ကို ရန်ကုန်မြို့ ရှင်စောပုလမ်းရှိ Myanmar Even Park တွင် ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်မှ ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်ထိ ပြုလုပ်ကျင်းပလျက်ရှိပါတယ်။ ဟောပြောပွဲများ၊ စာအုပ်ရောင်းချပွဲများ[Read More…]
January 16, 2016 — ဓါတ်ပုံသတင်း
တမန်တော်နေ့ အထိမ်းအမှတ် ဘာသာပေါင်းစုံမှ ဆရာတော်များ ဟောပြော (ဓါတ်ပုံသတင်း)
ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ၊ ၂၀၁၅ M-Media ဓါတ်ပုံ- မိုးစက် မဟာ တမန်တော်မြတ် မုဟမ္မဒ် (ဆွ) ဖွားသန့်စင်နေ့ အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် “ဘာသာမခြား လူမျိုးမခွဲ မေတ္တာနှင့် ခွင့်လွှတ်ချစ်ကြည်စို့” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရန်ကုန်မြို့[Read More…]
December 26, 2015 — ဓါတ်ပုံသတင်း, မြန်မာသတင်း